Maalinta: Noofambar 28, 2018
Tababaraha Gaadiidka ee Wadooyinka Basaska ee ka yimid Denizli
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Denizli nashaadaadyada tababarka ee shaqaalaheeda ayaa sii soconaya. Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli waxay sii wadaysaa siminaaro tababar-shaqo ah. Macnaha guud, Gaadiidka Magaalada Denizli ee Gaadiidka Dawladda Hoose Inc. ee shaqaalaha [More ...]
Luuqadaha taraafikada ee caasimadda
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara waxay ku daraysaa midab qurxinta muuqaalka casriga iyo bilicda leh ee Caarada iyadoo shaashaddeeda LED-yada la geliyay dhammaan Caasimadda waxayna gaarsiisaa macluumaadka deg degga ah ee wadooyinka waxayna u shaqeysaa darawalada. Wadada caasimada [More ...]
Deegaanka 7 ee Gölcük wuxuu isku daraa laba Colub oo Wadada
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso wadooyinka bixinta gaadiid tuulooyinka. Wadooyinka ciriiriga ah waa la ballaariyey, halka buundooyinka hal dariiq looga saarayo laba haad. Xaaladda guud, waaxda gaadiidka, xaafada 7 ee degmada Gölcük gaadiid [More ...]
Madaxweyne Vergili, Kardemir Aş. Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha Guurtida
Duqa Magaalada Karabük Rafet Vergili, KARDEMİR AŞ. Gudoomiyaha Gudiga Agaasimayaasha ayaa booqasho wacan ku tagey Kamil Güleç. Inta lagu gudajiray booqashada, KARDEMİR AŞ. maalgashiga deegaanka iyo mashaariicda masuuliyada bulshada [More ...]
Intii lagu gudajiray u wareejinta gegida diyaaradaha ee Istanbul, waxaa jiray digniin faa iido ah. Markii ay AKOM ka digtay baraf culus oo ku saabsan taariikhooyinka guuraya, taariikhda ayaa horay loo qaatay. Kulamada ku saabsan u soo wareejinta gegada diyaaradaha ee Istanbul awood buuxda [More ...]
Kanal Istanbul ee Gawaarida Ganacsiga oo kaliya
Xisbiga Jamhuuriga ee Xisbiga (CHP) NiPde MP Ömer Fethi Gürer ayaa u soo bandhigay Wasiirka Gaadiidka Cahit Turhan daraasadaha suurta galka ah ee Mashruuca Channel Istanbul ee Qorshaha TGNA iyo Shirka Guddiga Miisaaniyadda halkaas oo miisaaniyada [More ...]
Mashruucyada Gaadiidka laga bilaabo Yaryar ilaa Samsun
Duqa magaalada Canik Cusmaan Genç Furaha Mashaariicda Horumarinta Dhaqaalaha ee maxalliga ah, kuwa qaran iyo kuwa caalamiga ah ee loo diyaariyey fahamka gaadiidku way ka badbaadi doonaan marxaladda Samsuna. Samsun-Ciraaq Samsun-Batumi, Iron Silk Road xiriiriya Canik-Asarcık highway, Vezirköprü-Bafra [More ...]
CHP Sword, Izmir ayaa waydiistey mashaariicda gaadiidka
Grand National Assembly ee Turkey CHP xisbiga Assembly iyo Commissioner for Enterprises Dadweynaha, Ku-xigeenka Xeer-ilaaliyaha Izmir Erdan Sevda Seef, laakiin saadaaliyay in dhismaha ka socda oo timir ah marka, inkastoo maraayay [More ...]
RayHaber 28.11.2018 Warbixinta Shirka
Adeegga Cunnada ayaa la qaadi doonaa Nidaamka Dhismayaasha Dhaxalka ee Xerada Isku-dhafka iyo Adeegga Dayactirka Adeegga Dayactirka
Xubnaha CHP ee Golaha Magaalada Caasimadda Istambul waxay weydiisteen dib u dhaca khadadka metrooga ee magaalada Istanbul, baajinta hindisada iyo heerka shaqooyinka. Mehmet Berke Merter, Seyit Ali Aydoğmuş iyo xubno ka tirsan CHP oo ka socda Golaha Magaalaweynta Istanbul (IMM) [More ...]
Thanks to magaca 'Tour Of Mersin', oo si guul leh ay u maamusho Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin muddo sanado ah, 4 waxay noqotay magaalo ay doorbidaan kooxaha baaskiillada ka socda ee dibedda u duulaya. Mersin [More ...]
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu, waa khalad iyo macluumaad aan dhameystirneyn oo ku saabsan wareejinta Madaxweyne Erdogan marin habaabinta sababtoo ah wareejinta, ayuu yiri. Hadalada Erdogan ee ah “Waxaan xallinay dhibaatada haraadka ee İzmir” iyo biz waxaan sameynay 'ZBBAN'. [More ...]
Wadada 4. Xulashada Qaranka
28, oo ah afaraad ee Golaha Qaranka ee Wadada Wadnaha, ayaa ka bilaabay Ankara Arbacadii xarunta Halil Rifat Pasha Hall ee Agaasimaha Guud ee Wadooyinka. Agaasimaha guud ee wadooyinka waaweyn iyo gudiga wadooyinka wadanka turkiga [More ...]